ရှေးထုံးကိုလည်း မပယ်နဲ့ ဆိုတဲ့ စကားပုံအောက်ကနေ ရုန်းမထွက်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံသားများ - Zet Star
ရှေးထုံးကိုလည်း မပယ်နဲ့ ဆိုတဲ့ စကားပုံအောက်ကနေ ရုန်းမထွက်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံသားများ
“အခုခေတ်ကလေးတွေ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို မြတ်နိုးမှုအားနည်းလာတယ်”
“ဘယ်လိုမျိုးလဲ အဘိုး” “ငါတို့ငယ်ငယ်ကဆို ရုပ်သေးပွဲတို့ ဇာတ်ပွဲတို့သိပ်ကြိုက်ခဲ့တာ။ အခုဆို ရုပ်သေးပွဲကို ဘယ်လူငယ်တွေကြည့်လဲ။ ဘယ်သူမှ မကြည့်တော့ဘူး ကြာရင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု တိမ်ကောတော့မယ်”
“အဘိုးတို့ငယ်ငယ်က ဂိမ်းတွေရှိလား ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုကောင်းကောင်းကြည့်ရ လား” “ဟ ဒါက ဒီခေတ်မှ ပေါ်တာလေကွာ”
“အဘိုးတို့က ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဖျော်ဖြေရေးကို ရှုပ်ထွေးနေတယ် ရုပ်သေးဆိုတာ ဖျော်ဖြေမှုပဲအဘိုး။ အဘိုးကြည့်ခဲ့တုန်းကလည်း ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအနေနဲ့ ကြည့်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ ဖျော်ဖြေမှုအနေနဲ့ပဲ ကြည့်ခဲ့တာ…။ ကျနော်တို့ငယ်ငယ်ကဆို ဖန်မလီဂိမ်းဆိုတဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ ဂိမ်းတွေရှိတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ သိပ်ကြိုက်ခဲ့တာပေါ့။ ဒါထက်ကောင်းတာမှ မရှိတာ ။ ခုနောက်ပိုင်း ပီအကစ်ဝမ်း တွေ တူးတွေ ကွန်ပျူတာဂိမ်းတွေထွက်လာတော့ ဖန်မလီဂိမ်းကို မေ့ပစ်လိုက်ပြီ…။ ငါတို့ကြိုက်ခဲ့ဖူးတယ် မင်းတို့လည်း ကြိုက်လို့ဆိုပြီး အခုခေတ်ကလေးတွေကိုအတွေးအခေါ် အနိုင်ကျင့်လို့မရဘူး။
လေယဉ်ပျံယဉ်ကျေးမှုကို ရိုက်ညီနောင်က ဂလိုက်ဒါ စက်မဲ့လေယာဉ်နဲ့စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ တယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ဂလိုက်ဒါကို မသုံးကြတော့ဘူး။ ဒါဟာ ရိုက်ညီနောင်ရဲ့ကျေးဇူးကို မေ့ပစ်တာမဟုတ်ဘူး။ developed ဖြစ်အောင် upgradeမြှင့်တဲ့သဘောပဲ။ ရုပ်သေးပညာကို ချစ်စေချင်ရင် အဆက်မပြတ်တိုးတတ်အောင်ဖန်တီးနေရမယ်။upgradeမြှင့်နေရမယ် ရပ်ကျန်ခဲ့လို့မရဘူး”
“မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းဖို့ မြန်မာတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိတယ်”
“စကားလုံးကို သဘောကျတယ်။ လုပ်ရပ်ကတော့လွဲတယ်အဘိုး ထိန်းသိမ်းတယ်ဆိုတာ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆေးစိမ်သလို မပုပ်သိုးအောင် စိမ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူး။ သစ်ပင်ကို စောင့်ရှောက်သလို ရေလောင်းပေါင်းသင်းလုပ်ရင်း စောင့်ရှောက်ရတာမျိုး။ သစ်ပင်ဟာလည်း ဒီအတိုင်းရပ်မနေဘူး ကြီးထွားလာရမယ်။ ရတု ရကန် ပျို့ အိုင်ချင်း တျာချင်းအားလုံးဟာ ဖန်တီးထားတာချည်းပဲ။ အချိန်ကြာလို့သာရိုးရာဖြစ်သွားတာ”
“မင်းစကားက ဘာကြီးလဲ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို တန်ဖိုးမထားသလိုကြီး ဖြစ်နေတယ်။ စကားလုံးက ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်နဲ့”
“လူတွေမှာ ရိုးအီတတ်ခြင်းဆိုတဲ့ စိတ်သဘောလေးတွေရှိတယ်။ ရိုးအီတတ်ခြင်းဟာ အသစ်ကိုဆာလောင်စေတယ်။ အဖြူ အမဲရုပ်ရှင်ကိုတောင် နပ်မှန် မကြည့်ရတဲ့ခေတ်မှာ ၅သိန်းတန် အခင်းအကျင်းနဲ့ ရုပ်သေးကို မက်မက်မောမောကြည့်တယ်။ ဒေါ်လာသန်းနှစ်ရာလောက် ရင်းပြီးရိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ယှဉ်ပြီး ရုပ်သေးကို ဘယ်သူတွေကြည့်ချင်ဦးမလဲ။ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ကိုတောင် အရည်အသွေးနိမ့်ကျမှုကြောင့် လူငယ်တွေ တော်လှန်နေကြပြီ။ မြန်မာပေါကားတွေရပ်တဲ့”
“ဒါဆို ဂိမ်းဆော့နေတဲ့ ၇နှစ်သားကလေးနဲ့ တို့ငယ်ငယ်ကလို ပြေးလွှားနေတဲ့ကလေးဆို ဘယ်အရာပိုမှန်မလဲ”
“ခေတ်ရွေ့လျားခြင်းမှာ အဆိုးရော အကောင်းရော ဒွန်တွဲတယ်အဘိုး။ ကာယဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုအပ်နေသေးတဲ့ ကလေးဟာ ပြေးလွှားခုန်ပေါက် ဆော့ကစားသင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဥာဏအားကစားမျိုးလည်း လုပ်သင့်တာပဲ… မျှတဖို့ပဲလိုတယ်။ ပြေးလွှားဆော့ကစားခြင်းဟာ ကလေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို မလွှမ်းမိုးနိုင်ပေမယ့် ဂိမ်းအစုံပါတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးဟာ ကလေးကို ထိန်းချုပ် သွားနိုင်တယ်။ ဒါဟာ ရိုးရာဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းနဲ့ မဆိုင်ဘူး မိဘတွေ ထိန်းကျောင်းနိုင် ဖို့ပဲလိုတယ်”
“ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို မင်းက ကန့်ကွက်သလို ဖြစ်နေတယ်” “အဘိုးပြောသလိုပဲထားပါဦး အဘိုးက ဘယ်ခေတ်က ရိုးရာကို နှစ်သက်တာလဲ။တကောင်းခေတ်လား ပျူ ခေတ်လား။ ပုဂံ ပင်းယ အင်းဝ တောင်ငူ ညောင်းရမ်း ကုန်းဘောင်။ ဘယ်ခေတ်က ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းတာလဲ…”
“တိုင်းတပါးယဉ်ကျေးမှု မလွှမ်းမိုးခင် ကာလက ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းကို ဆိုလိုတာ” “ဘုရင့်နောင်တောင် အယုဒ္ဓယ ယဉ်ကျေးမှုကို မြန်မာပြည်ထဲ ဆွဲထည့်ခဲ့သေးတယ်။ သျောင်ဆိုတာတောင် ခေတ်တစ်ခေတ်မှာ ဖက်ရှင် အသစ်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သေးတာပဲ။ တီထွင်ကြတယ် ဖန်တီးကြတယ်။ တီထွင်မှုအားကောင်းတဲ့ လူမျိုး နိုင်ငံဟာ တိုးတက် သွားကြတယ်”
အဘိုးကြီးက ဟက်ဟက်ပက်ပက်ရယ်တယ်။ “မင်းက ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးလုပ်နေတာပဲ” “အတွေးအခေါ်တော်လှန်ရေးပါအဘိုး။ အရစ္စတိုလ်တယ်ရဲ့ ကမ္ဘာဗဟိုပြု အတွေးအခေါ်ဖြစ်တဲ့ လေးသောပစ္စည်းက ပေါ့သောပစ္စည်းထက်စောလျှင်စွာ မြေသို့ကျသည်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ဂလီလီယိုက တော်လှန်ခဲ့တယ်
ရှေးထုံးလည်း မပယ်နဲ့ စျေးသုံးလည်းမလွယ်နဲ့ဆိုပြီး အပ်ကြီးကြီးနဲ့ချုပ်ခဲ့ကြတယ်။ စျေးသုံးမလွယ်သင့်တာကို လက်ခံပေမယ့် ရှေးထုံးမပယ်ရဘူး ဆိုတာကို လက်မခံဘူး။
ဥပမာ မြန်မာမှာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်် ကန်တော့ပွဲပေးတယ်။ ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်ကားတွေ ကန်တော့ ပွဲပေးကြလို့လား။ ဒီရှေးထုံးတွေ ဘယ်ကအစပြုခဲ့မှန်း မသိတဲ့ ဥပါဒါန်ခေါ် လွဲမှားစွာ ယုံကြည်ခြင်းတွေ ပယ်ရမယ် နားလည် ယုံကြည်မှုနဲ့တည်ဆောက်ရမယ့် အိမ်ထောင်ရေးကို ခြယ်လှယ်နေတဲ့ ဓမ္မာ သောက အင်းဝ ရာဇာဥသာ စိန်ပန်း ဒန်းလှ ကိုရှာ စတဲ့ မိတ်ဖက်နေ့နာမ်ဆိုတာတွေ ပယ်ရဲရမယ်….”
”ရှေးလူကြီးတွေက ကောင်းနိုးကောင်းရာတွေကို နှောင်းလူတွေအတွက် ချန်ခဲ့တာ”
“လက်ခံပါတယ် ဒါပေမယ့် ဥပမာလေးပြောကြည့်မယ် မြန်မာ့ရာဇဝင်မှာ နာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ယိမ်းနွဲ့ပါးဒါးဆိုပါတော့…။ အင်းဝဘုရင် သိုဟန်ဘွားကို မင်းကြီးရန်နောင်လုပ်ကြံခဲ့တဲ့ဒါး..။ အကယ်၍များ မင်းကြီးရန်နောင်က ဒီဒါးဟာ တိုက်တိုင်းအောင်ဒါးဖြစ်တယ်၊ ဒီဒါးနဲ့တိုက်ရင် အောင်ပွဲတွေ ရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ဆိုပါစို့…။ ဘုရင်နောင်ခေတ်မတိုင်ခင်မို့ သေနတ်တွေ အမြှောက်တွေ မရှိသေးဘူး…။ တိုက်ပွဲဝင်လက်နက်ဟာ ဒါးလှံလေးမြှားခေတ်မှာ သူ့စကား မှန်နေလိမ့်မယ်။ ဒီဘက် ခေတ်မှာ ဘယ်စစ်သားက ဒါးကိုင်ပြီး စစ်တိုက်မလဲ။ သူကတော့ကောင်းစေချင်လို့ ပြောခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမယ့် လွဲသွားပြီ။ မင်းကြီးရန်နောင်ကို လေးစားသည့်တိုင် သူ့စကားကို ပယ်ရတော့မယ်”
“လူကြီး လူငယ်စကားပြေလေးတောင် သတိရမိသေးတယ်အဘိုးရယ်။ ကျနော့်ဘက်က စကားလုံးတွေ လွန်ခဲ့သည်ရှိသော် တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ”
ကိုယ်မှန် သူမှား အတ္တဗဟိုပြု အတွေးအခေါ်တွေကြားမှာ ကျနော်တို့ရှင်သန်ကြီး ထွားခဲ့ကြတယ် ရှေးနဲ့ ဖက်ရှင်ပိုင်းအမြင်မတူတော့ သရုပ်ပျက်တဲ့ အတွေးအခေါ်မတူတော့ဖောက်ပြန်ရေးသမား။ ဖျော်ဖြေရေးအကြိုက်မတူတော့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုမချစ်တတ်ဘူးတဲ့။
ပြောကြပါစေတော့ ငြိမ်းချမ်းစွာပဲ ကွဲလွဲပစ်လိုက်မယ်
← ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး တန်ဖိုး ဘယ်လောက် ရှိနိုင်မလဲ? (အခြေခံလူတန်းစားတွေ လက်လှမ်းမီနိုင်ပါ့မလား)
ဘွဲ့ဆိုတာ အဆင့်အတန်းတခုလား? ဘွဲ့ရတာနဲ့ အဆင့်အတန်း မြင့်သွားရောလား (ဘွဲ့ရပညာတတ်နဲ့ ငါးစိမ်းသည်) →